China Perforated aruminiyamu ukanyatsotarisisa fekitari uye bhizimisi | Jixiang
Punching aruminiyamu ukanyatsotarisisa anoshandisa aruminiyamu chiwanikwa ndiro ine simba rakakura sechinhu chepasi zvinhu. Ukobvu huri pakati pe2 mm ne4 mm. Ukuru uye kududzirwa kwekubaya aruminiyamu veneer zvakasununguka, uye kune mhando zhinji dzekusarudza kubva. Iyo yepamusoro-soro kurova aruminiyamu veneer ichawedzerwa nekusimbisa mbabvu kumashure kana ichigadziriswa, kuitira kuti punching aruminiyamu veneer igadzirise kushushikana kwakakomberedza kana uchitakura mutoro wegadziriro yakatwasuka, simbisa iko kutakura kugona uye kugadzikana kwealuminium veneer, uye simbisa simba uye ukobvu hwealuminium veneer. Izvi zvinopa sarudzo yakanaka yezvinhu kune vagadziri mukushandisa kwealuminium veneer zvinhu.
1. Inogona kuve yakagadzirirwa pane inoda kusangana nezvinodiwa zvevatengi. Iyo yakakura saizi saizi ndeye 1500mm * 4000mm
2.Mhando dzakasiyana: Dhizaini yevaravara, pasa, kurova zvibodzwa, nezvimwe.
3. Fluorocarbon pendi isingaite ngura, inodzivirira UV uye colorfast.
5. Kuisa nyore uye kuvaka, kuderedza kuisa uye kugadzirisa mari.
6. Aluminium alloy zvinhu zvinogona kushandiswazve zvachose uye kushandiswazve, inova girini uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
7. Hunhu kuvimbiswa, kusimba.
Iyo perforated aluminium veneer inogona kusangana nezvinodiwa zvemabasa akasiyana siyana, uye inoshandiswa zvakanyanya mukati mekunze madziro, siringi, yemukati madziro zvichingodaro.
Pashure: Aluminium Corrugated Yakaumbwa Panel
Zvadaro: 4D kuteedzera huni zviyo aluminium veneer